03.09.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– यादद्वारा सतोप्रधान बन्नुका साथ-साथै पढाइद्वारा कमाई जम्मा गर्नु छ , पढाइको समय बुद्धि यता- उता नभागोस्।”
तिमी डबल अहिंसक, अज्ञात योद्धाहरूको कुनचाहिँ विजय निश्चित छ र किन?
तिमी बच्चाहरू जसले मायालाई जित्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौ, तिम्रो लक्ष्य छ– हामीले रावणबाट आफ्नो राज्य लिएरै छोड्छौं....। ड्रामामा यो युक्ति पनि रचिएको छ। तिम्रो विजय निश्चित छ किनकि तिमीसँग साक्षात् परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। तिमीले योगबलद्वारा विजय प्राप्त गर्छौ। मनमनाभवको महामन्त्रबाट तिमीलाई राजाई मिल्छ। तिमीले आधाकल्प राज्य गर्छौ।
बच्चाहरू जब सामुन्ने बस्छन्, तब सम्झन्छन्– वास्तवमा हाम्रो कुनै साकार टिचर हुनुहुन्न, हामीलाई पढाउने ज्ञानको सागर बाबा हुनुहुन्छ। यसमा त पक्का निश्चय छ– उहाँ हाम्रो पिता पनि हुनुहुन्छ। जब पढ्छौं तब पढाइमा ध्यान हुन्छ। विद्यार्थी आफ्नो विद्यालयमा बस्दा टिचरको याद आउँछ, नकि पिता किनकि विद्यालयमा बसेको हुन्छ। तिमीले पनि जानेका छौ– बाबा पनि टिचर हुनुहुन्छ। नामलाई त समातिराख्नु छैन। ध्यानमा राख्नु छ– म आत्मा हुँ, बाबाद्वारा सुनिरहेको छु। यस्तो न त सत्ययुगमा, न कलियुगमा हुन्छ। केवल एकै पटक संगममा हुन्छ। तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झन्छौ। हाम्रो पिता यतिबेला टिचर हुनुहुन्छ किनकि पढाउनु हुन्छ, दुवै काम गर्नुपर्छ। आत्माले पढ्छ शिवबाबासँग। यो पनि योग र पढाइ हुन्छ। पढ्छ आत्माले, पढाउनु हुन्छ परमात्माले। जब तिमी सम्मुख हुन्छौ यसमा अरू धेरै फाइदा हुन्छ। धेरै बच्चाहरू राम्ररी यादमा रहन्छन्। कर्मातीत अवस्थामा पुगेपछि त्यो पनि पवित्रताको तागत प्राप्त भए जस्तै हो। तिमीले जानेका छौ– शिवबाबाले हामीलाई पढाउनु हुन्छ। यो तिम्रो योग पनि हो, कमाई पनि हो। आत्मालाई नै सतोप्रधान बन्नु छ। तिमी सतोप्रधान पनि बनिरहेका छौ, धन पनि लिइरहेका छौ। आफूलाई आत्मा अवश्य सम्झिनुपर्छ। बुद्धि भाग्नु हुँदैन। यहाँ बस्दा बुद्धिमा यो रहोस्– शिवबाबा पढाउनको लागि टिचरको रूपमा आउनु हुन्छ। उहाँ नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। बाबालाई याद गर्नु छ। स्वदर्शन चक्रधारी पनि हामी नै हौं। लाइट हाउस पनि हौं। एउटा आँखामा शान्तिधाम, अर्को आँखामा जीवनमुक्तिधाम छ। यी आँखाको कुरा होइन, आत्माको तेस्रो नेत्र भनिन्छ। अहिले आत्माहरूले सुनिरहेका छन्, जब शरीर छोड्छन्, आत्मामा यो संस्कार जान्छ। अहिले तिमीले बाबासँग योग लगाउँछौ। सत्ययुगदेखि लिएर तिमी वियोगी थियौ अर्थात् बाबासँग योग थिएन। अहिले तिमी योगी बन्छौ, बाबा समान। योग सिकाउनेवाला हुनुहुन्छ ईश्वर, त्यसैले उहाँलाई भनिन्छ योगेश्वर। तिमी पनि योगेश्वरका बच्चा हौ। उहाँले योग लगाउनु पर्दैन। उहाँ हुनुहुन्छ योग सिकाउने परमपिता परमात्मा। तिमी एक-एक योगेश्वर, योगेश्वरी बन्छौ फेरि राज-राजेश्वरी बन्छौ। उहाँ हुनुहुन्छ योग सिकाउने ईश्वर। स्वयं सिक्नुहुन्न, सिकाउनु हुन्छ। कृष्णको आत्माले नै अन्त्यको जन्ममा योग सिकेर फेरि कृष्ण बन्छ, त्यसैले कृष्णलाई पनि योगेश्वर भनिदिन्छन् किनकि उनको आत्माले अहिले सिकिरहेको छ। योगेश्वरसँग योग सिकेर कृष्ण पद पाउँछ। यिनको नाम फेरि बाबाले ब्रह्मा राख्नु भएको छ। पहिला त लौकिक नाम थियो फेरि मरजीवा बनेका हुन्। आत्मालाई नै बाबाको बन्नु छ। बाबाको बन्यो त्यसैले मर्यो नि। तिमीले पनि बाबाद्वारा योग सिक्छौ। यी संस्कारबाटै तिमी जान्छौ शान्तिधाममा। फेरि प्रारब्धको नयाँ पार्ट इमर्ज हुन्छ। त्यहाँ यी कुरा याद रहँदैनन्। यो कुरा अहिले बाबाले सम्झाउनु हुन्छ। अहिले पार्ट पूरा हुन्छ। फेरि पहिलाबाट सुरु हुन्छ। जसरी बाबालाई संकल्प उठ्यो– म जाउँ। बाबा भन्नुहुन्छ– म आउँछु र मेरो वाणी चल्न सुरु हुन्छ। त्यहाँ त शान्तिमा हुन्छु। फेरि ड्रामा अनुसार उहाँको पार्ट सुरु हुन्छ। आउने त संकल्प उठ्छ। फेरि यहाँ आएर पार्ट खेल्छु। तिम्रो आत्माले पनि सुन्छ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहिला जस्तै। दिन-प्रतिदिन उन्नति पनि हुँदै जान्छ। एक दिन तिमीलाई धेरै राम्रो हल पनि मिल्छ, जुन हलमा धेरै ठूला-बडा मानिसहरू पनि आउने छन्। सबै सँगै बसेर सुन्छन्। दिन-प्रतिदिन धनवान पनि कंगाल हुँदै जान्छन्, पेट भित्र पस्छ। यस्तो आपद आउनु छ, मुसलधार बर्सात हुन्छ अनि सारा खेती आदि पानीमा डुब्छ। प्राकृतिक प्रकोप त आउनु नै छ। विनाश हुन्छ, यसलाई भनिन्छ प्राकृतिक विपद। बुद्धिले भन्छ विनाश अवश्य हुन्छ। त्यतातिरको लागि बमहरू पनि तयार छन्, प्राकृतिक विपद आदि फेरि हुन् यहाँको लागि। त्यसमा धेरै हिम्मत चाहिन्छ। अंगदको पनि उदाहरण छ नि, उनलाई कसैले हल्लाउन सकेन। यो अवस्था पक्का बनाउनु पर्छ– म आत्मा हुँ, शरीरको भान टुट्दै जाओस्। सत्ययुगमा त जब समय पूरा हुन्छ, अनि स्वत: साक्षात्कार हुन्छ। अब मैले यो शरीर छोडेर बच्चा बन्नु छ। एक शरीर छोडेर अर्कोमा प्रवेश गर्छन्। सजाय आदि त त्यहाँ केही पनि हुँदैन। दिन-प्रतिदिन तिमी निकट आउँदै जान्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ– मेरो जुन पार्ट भरिएको छ त्यो खुल्दै जान्छ। बच्चाहरूलाई बताउँदै जान्छु। फेरि बाबाको पार्ट पूरा भएपछि तिम्रो पनि पूरा हुन्छ। फेरि तिम्रो सत्ययुगको पार्ट सुरु हुन्छ। अब तिमीले आफ्नो राज्य लिनु छ। यो ड्रामा धेरै युक्तिले बनेको छ। तिमीले मायामाथि विजय पाउँछौ, यसमा पनि समय लाग्छ। उनीहरूले त एकातिर सम्झन्छन्– हामी स्वर्गमा बसेका छौं। यो सुखधाम बनेको छ, अर्कोतिर फेरि गीतमा पनि विश्वको हालत सुनाउँछन्। तिमीले जानेका छौ– यो त अझै तमोप्रधान बनेको छ। ड्रामा अनुसार तमोप्रधान पनि जोडसँग हुँदै जान्छ। तिमी अहिले सतोप्रधान बनिरहेका छौ। अब निकट आउँदै जान्छौ, आखिरमा विजय त तिम्रो हुनु नै छ। हाहाकारपछि फेरि जयजयकार हुन्छ। घिउका नदीहरू बग्छन्। त्यहाँ घिउ आदि किन्नु पर्दैन। सबैसँग आफ्नै फस्टक्लास गाईहरू हुन्छन्। तिमी कति उच्च बन्छौ। तिमीले जानेका छौ– विश्वको इतिहास-भूगोल फेरि दोहोरिन्छ। बाबा आएर विश्वको इतिहास दोहोर्याउनु हुन्छ। बाबाले भन्नु भएको छ, यो पनि लेखिदेऊ– विश्वको इतिहास-भूगोल कसरी दोहोरिन्छ, आएर बुझ्नुहोस्। जो होसियार हुन्छन्, उनले भन्छन्– अहिले कलियुग हो, अवश्य पनि सत्ययुग दोहोरिन्छ। कसैले त भन्छन् – सृष्टिको चक्र लाखौं वर्षको छ, अहिले नै कसरी दोहोरिन्छ? यहाँ सूर्यवंशी-चन्द्रवंशीको इतिहास त छैन। अन्त्यसम्म यो चत्र कसरी दोहोरिन्छ। यो पनि जानेका छैनन्– यिनीहरूको राज्य अब फेरि कहिले हुन्छ? राम राज्यलाई जानेका छैनन्। अहिले तिम्रो साथमा बाबा हुनुहुन्छ। जतातिर साक्षात परमपिता परमात्मा बाबा हुनुहुन्छ उनीहरूको विजय अवश्य हुन्छ। बाबाले कहाँ हिंसा गराउनु हुन्छ र। कसैलाई मार्नु हिंसा हो नि। सबैभन्दा ठूलो हिंसा हो काम कटारी चलाउनु। अहिले तिमी डबल अहिंसक बनिरहेका छौ। त्यहाँ हुन्छ नै अहिंसा परमो देवी-देवता धर्म। त्यहाँ न त लड्छन्, न विकारमा जान्छन्। अहिले तिम्रो हो योगबल, तर यसलाई नबुझेका हुनाले शास्त्रहरूमा असुर र देवताहरूको लडार्इं लेखिदिएका छन्। अहिंसालाई कसैले जानेका छैनन्। यो कुरा तिमीले नै जानेका छौ। तिमी हौ गुप्त योद्धा। अज्ञात तर धेरै प्रसिद्ध। तिमीलाई कसैले योद्धा सम्झन्छ? तिमीद्वारा सबैलाई मनमनाभवको सन्देश मिल्छ। यो हो महामन्त्र। मनुष्यले यी कुरालाई बुझ्दैनन्। सत्ययुग-त्रेतामा यो हुँदैन। मन्त्रद्वारा तिमीले राजाई पायौ फेरि आवश्यकै हुँदैन। तिमीले जानेका छौ– हामीले कसरी चक्कर लगाएर आएका छौं। अहिले फेरि बाबाले महामन्त्र दिनुहुन्छ। फेरि आधाकल्प राज्य गर्छौ। अब तिमीले दैवी गुण धारण गर्नु र गराउनु छ। बाबा राय दिनुहुन्छ– आफ्नो चार्ट राख्नाले धेरै आनन्द आउँछ। रजिस्टरमा गुड, बेटर, बेस्ट हुन्छ नि। स्वयं पनि महसुस गर्छन्। कसैले राम्ररी पढ्छन्, कसैको ध्यान रहँदैन भने फेल हुन्छन्। यो हो फेरि बेहदको पढाइ। बाबा टिचर पनि हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै चल्छ। यहाँ एउटै पिता हुनुहुन्छ जसले भन्नुहुन्छ मरजीवा बन। तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। बाबा भन्नुहुन्छ– म तिम्रो पिता हुँ। ब्रह्माद्वारा राज्य दिन्छु। यी भए बीचका दलाल, यिनीसँग योग लगाउनु छैन। अहिले तिम्रो बुद्धि लागेको छ उहाँ आफ्ना पतिहरूका पनि पति शिव प्रियतमसँग। यिनीद्वारा उहाँले तिमीलाई आफ्नो बनाउनु हुन्छ। भन्नुहुन्छ– आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर। म आत्माले पार्ट पूरा गरें, अब बाबाको पास जानु छ, घर। अहिले त सारा सृष्टि तमोप्रधान छ। ५ तत्त्व पनि तमोप्रधान छन्। त्यहाँ सबैकुरा नयाँ हुन्छ। यहाँ त हेर– हीरा-जुहारत आदि केही पनि छैन। सत्ययुगमा फेरि कहाँबाट आउँछ? खानीहरू जुन अहिले खाली भएका छन् ती सबै फेरि अब भरिदै जान्छन्। खानीहरूबाट खनेर ल्याउँछन्। विचार गर– सबै चीजहरू नयाँ हुन्छन् नि। लाइट आदि पनि नेचुरल जस्तै हुन्छ, विज्ञानबाट यहाँ सिकिरहन्छन्। त्यहाँ यो पनि काममा आउँछ। हेलिकप्टर खडा हुन्छन्, बटन दबायो चल्यो। कुनै मेहनत हुँदैन। त्यहाँ सबै फूलप्रुफ हुन्छन्, कहिल्यै मेशिन आदि बिग्रिदैन। घरमा बसेर सेकेण्डमा विद्यालयमा वा घुम्न-फिर्न पुग्छन्। प्रजाको लागि फेरि त्यो भन्दा कम हुन्छ। तिम्रो लागि त्यहाँ सबै सुख हुन्छ। अकालमा मृत्यु हुन सक्दैन। त्यसैले तिमी बच्चाहरूले कति ध्यान दिनुपर्छ। मायाको पनि धेरै जोड हुन्छ। यो हो मायाको अन्तिम श्वास। लडाईंमा हेर कति मर्छन्। लडाईं बन्द हुँदैन। कहाँ यति सारा दुनियाँ, कहाँ केवल एउटै स्वर्ग‚ कति फरक हुन्छ। त्यहाँ यस्तो कहाँ भनिन्छ र, गंगा पतित-पावनी हुन्। त्यहाँ भक्ति मार्गको कुनै कुरा हुँदैन। यहाँ गंगामा हेर सारा शहरको फोहर गइरहन्छ। मुम्बईको सारा फोहर सागरमा बग्छ।
भक्तिमा तिमीले ठूला-ठूला मन्दिर बनाउँछौ। हीरा-जुहारतको त सुख हुन्छ नि। पौने भाग सुख हुन्छ, बाँकी चौथाई हुन्छ दु:ख। आधा-आधा भए त फेरि मजा हुँदैन। भक्ति मार्गमा पनि तिमी धेरै सुखी रहन्छौ। पछि आएर मन्दिर आदिलाई लुट्छन्। सत्ययुगमा तिमी कति धनवान थियौ त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। लक्ष्य-उद्देश्य त सामुन्ने खडा छ। माता-पिताको त निश्चित छ। गायन गरिन्छ– खुसी जस्तो खुराक छैन। योगद्वारा आयु बढ्छ।
अहिले आत्मालाई स्व को दर्शन भएको छ– हामीले ८४ को चक्कर लगाउँछौं। यति धेरै पार्ट खेल्छौं। सबै कलाकार आत्माहरू तल आएपछि बाबाले सबैलाई लैजानुहुन्छ। शिवको बरियाँत भन्छन् नि। यी सबै कुरा तिमीले जानेका छौ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। जति तिमी यादमा रहन्छौ त्यति खुसीमा रहन्छौ। दिन-प्रतिदिन अनुभव गरिरहन्छौ किनकि सिकाउनेवाला त उहाँ बाबा हुनुहुन्छ नि। यिनले पनि सिकाइरहन्छन्। यिनले सोध्न आवश्यक छैन, सोध्छौ तिमीले। यिनले त सुनिरहन्छन्। बाबाले जवाफ दिनुहुन्छ, यिनले पनि सुन्छन्। यिनको क्रियाकलाप कति अनौठो छ। यिनी पनि यादमा रहन्छन्। फेरि बच्चाहरूलाई वर्णन गरेर सुनाउँछन्। बाबाले मलाई खुवाउनु हुन्छ। मैले उहाँलाई आफ्नो रथ दिन्छु, त्यसैमा सवारी गर्नुहुन्छ भने किन खुवाउनुहुन्न। यो मानव अश्व हो। शिवबाबाको रथ हुँ– यो ख्याल रह्यो भने पनि शिवबाबाको याद रहन्छ। यादद्वारा नै फाइदा हुन्छ। भण्डारामा भोजन बनाउँदा पनि सम्झ– हामीले शिवबाबाका बच्चाहरूको लागि बनाउँछौं। स्वयं पनि शिवबाबाका बच्चा हौ त्यसैले यसरी याद गर्नाले पनि फाइदा नै छ। सबैभन्दा ठूलो पद उनलाई मिल्छ, जसले यादमा रहेर कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्छन्। साथसाथै सेवा पनि गर्छन्। यी बाबाले पनि धेरै सेवा गर्छन् नि। यिनको बेहदको सेवा छ, तिमीले हदको सेवा गर्छौ। सेवाद्वारा नै यिनलाई पनि पद मिल्छ। शिवबाबा भन्नुहुन्छ– यसो-यसो गर, यिनलाई पनि राय दिनुहुन्छ। तुफान त बच्चाहरूलाई आउँछ। याद विना कर्मेन्द्रियहरू वशमा हुन मुश्किल छ। यादद्वारा नै बेडा पार हुनु छ। यो कुरा शिवबाबा भन्नुहुन्छ वा ब्रह्मा बाबा भन्नुहुन्छ– यो बुझ्न पनि मुश्किल हुन्छ। यसमा धेरै महीन बुद्धि चाहिन्छ। अच्छा!
१) यतिबेला पूरा-पूरा मरजीवा बन्नु छ। पढाइ राम्ररी पढ्नु छ, आफ्नो चार्ट वा रजिस्टर राख्नु छ। यादमा रहेर आफ्नो अवस्था कर्मातीत बनाउनु छ।
२) अन्तिम विनाशको दृश्य हेर्नको लागि हिम्मतवान बन्नु छ। म आत्मा हुँ– यस अभ्यासद्वारा शरीरको भान टुट्दै जाओस्।
कुनै पनि विकराल समस्यालाई शीतल बनाउने सम्पूर्ण निश्चयबुद्धि भव
जसरी बाबामा निश्चय छ, त्यसरी नै स्वयंमा र ड्रामामा पनि सम्पूर्ण निश्चय हुनु पर्छ। स्वयंमा यदि कमजोरीको संकल्प उत्पन्न हुन्छ भने कमजोरीको संस्कार बन्छ। त्यसैले व्यर्थ संकल्परूपी कमजोरीका कीटाणु आफूभित्र प्रवेश हुन नदेऊ। साथसाथै जुन पनि ड्रामाको सीन देख्छौ, हलचलको सीनमा पनि कल्याणको अनुभव होस्, वातावरण हलचलको होस्, समस्या विकराल होस् तर सदा निश्चयबुद्धि विजयी बन्यौ भने विकराल समस्या पनि शीतल हुन्छ।
जसको बाबा र सेवासँग प्यार छ, उसलाई परिवारको प्यार स्वत: मिल्छ।